Shiinaha 3030 shaashadda ayaa keentay soo saarayaasha xargaha iyo alaabada | Huayuemei
Shayga Daaha LED Strip
Faahfaahinta 500 * 16.8 * 1.6mm
Awood 5.4w / kumbiyuutarada
Daaha LED Strip wuxuu bixiyaa dhibic-dhibic-dhibic substrate fudud oo bilaash ah oo xaddidan illaa 500 lbs iftiinka isku-dhafka ah ee ugu fiican
NALKA MIDABKA / TABARNIMADA
Daaha LED Strip wuxuu bixiyaa iftiin isku mid ah, isagoo ka fogaanaya meelaha kulkulul. Nidaamku wuxuu u baahan yahay danab hooseeya oo wuxuu cunaa 60% tamar ka yar, marka loo eego nidaamka kale
FARSAMADA GUDDIGA CUSTOM
Daaha LED Strip waxaa lagu hagaajin karaa adoo hagaajinaya garoonka u dhexeeya looxyada LED iyadoo kuxiran alaabada faafiyaha, dib udhaca iyo shuruudaha wax soo saarka lumen
KALIYA / LABA LABA DHAR
Looxyadayada LED-ka waxay noqon karaan hal-ama laba-dhinac oo leh faraq yar oo kharash ah. Kufiican saqafka, codsiyada darbiga ku dhegan iyo wareega
Iyaga oo u baahan qalab yar iyo khibrad la’aan, Daaha LED Strip ayaa si fudud loo rogrogmi karaa loona habeyn karaa cabir ama qaab kasta
Markay tahay 70 garaam halkii cagood, Daaha LED Strip wuxuu ubaahanyahay xoojin gaar ah
1. Curtain LED Strip wuxuu helay nidaamka nalka LED-ka ee loo yaqaan 'CE' iyo 'UL' ee la aqoonsan yahay ee soo saara nalal isku mid ah. Daaha LED Strip wuxuu dib u iftiimin karaa tiro badan oo faafiyeyaasha iyo qalabka loogu talagalay codsiyo badan iyo isdhexgalka qaabdhismeedka.
Heerkulka midabka, CRI, Cabbirka ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo codsigaaga. 6.Waxay noqon kartaa mid yareyn kara xakamaynta.
Nalalka aan caadiga ahayn iyo is-dhexgalka Architectural-ka ayaa gacanta-la-iskula laalaa Curiyaha LED Strip.
4 .. Waxaan aqbalnaa OEM & ODM si waafaqsan codsigaaga.
5. Bixi adeeg tayo sare leh oo ugu fiican iibka kadib.
6.Kulka heerkulka waxaa lagu habeyn karaa codsigaaga (2800-12000K).
7. Garanti waa 3 sano. Heerkulka shaqadu waa -50 ℃ ~ 50 ℃.
Xaddidaadaha iftiiminta ee la bixiyay waxay hubinayaan iftiinka dusha sare. Waxay kuxirantahay nooca walxaha loo adeegsado xarfaha kanaalka ama sanduuqa laydhka ku shuban, astaamaha ayaa isbadali kara.
2. Module-ka loo yaqaan 'LED module' laftiisa iyo dhamaan qeybihiisa waxaa laga yaabaa inaysan aheyn mid farsamo ahaan culeys saaran.
3. Fadlan hubi in korontada ay tahay awood ku filan oo wadarta guud ee xamuulka. Kaliya shaqaale uqalma ayaa loo ogolyahay inay qabtaan rakibida.
4. Naqshadaynta guryuhu waa inay ahaataa mid waafaqsan heerarka IP ee arjiga.
5.Haddii qaab dhismeedka ilaalinta kororka uusan ka dhex jirin qeybiyaha korontada, ilaaliyaha hillaaca waa in lagu sii siyaadiyaa.
Hore: Daaha IP67 wuxuu horseeday nalka xargaha
Xiga: SMD5050 nal aan biyuhu u saarnayn iftiinka xargaha iftiinka dharka
Guddi nalka midab keliyi uu hogaaminayo
2835 ayaa hogaaminaya nalka hore ee muraayadda faafiya
RGBW Guddi Iftiimiya Fudud oo LED ah
Nolosha hogaamineysa iftiinka
hoggaamiyey nalka iftiinka hore